KP Oli – Page2– नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
Posted in चलचित्र, People, Politics	| Tagged Film City, KP Oli	| Leaveacomment
गोरू नांगो देख्दा लाज नलागेका प्रधानमन्त्रि केपि ओलिका केहि डायलगहरु
Posted on October 14, 2015 October 14, 2015 by Anand
हालै प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त भएका केपि ओलिलाइ बोलिको गोलि हान्न खप्पिस नेता मानिन्छ । काम नगर्ने, बोल्न मात्र जान्ने भनेर आरोप लाउने पनि प्रशस्तै छन् । जसले जे भने पनि उनको उखान टुक्का मिश्रित भाषणले प्रभावित नहुने कमै छन्। आज तिनै नेताका उखान टुक्का प्रस्तुत गर्दैछु । उनको जिवनि (अडियो भिडियो सहित) पढन मन लागेमा केहि समय अघि पोष्ट गरिएको थियो । यि मध्ये केहि उखान पहिले पनि पोस्ट गरिएका थिए ।
गोरू नांगो देख्दा मलाई अहिलेसम्म लाज लागेको छैन ।
सरकारमा बस्ने एमालेको धर्म होइन । ब्राह्मणले बिहान उठेर तुलसीमा पानी हाल्छ, गायत्री मन्त्र जप्छ, शुक्रबार–शुक्रबार मुसलमान मस्जिद जान्छ, आइतबार क्रिस्चियन चर्चमा जान्छ भनेजस्तो एमाले सत्तामा जान्छ भन्ने पनि हुन्छ ? (लौ… यो पालि भएछ)
वनमाराको झाडीमा पीपलको बिरुवा छोपियो भनेर पीपल हरायो भन्न मिल्दैन । पीपल रुख बनेपछि वनमारा आफैं खुइलिएर जान्छ ।
कपाल काट्न सिक्ने भए कमाराका टाउकाबाट सिक्नु भन्ने उखान छ । कपाल भुत्ल्याइए कमाराको भुत्ल्याइन्छ, रौँ उखेलिए कमाराको उखेलिन्छ । दुखे कमारालाई दुख्छ । टाटेपाटे भए कमारो हुन्छ । तर, कपाल काट्न जानेपछि ठूलाबडाको टाउकामा काट्नु भनिएको छ । मलाई लाग्छ– हामीलाई कमाराको टाउको बनाएर प्रयोग गर्न खोजिएको छ ।
हात्ती दुब्लाएर बोरामा अट्दैन, मुसो मोटाएर हात्ती हुँदैन ।
छोराको तिघ्रा बढेपछि बाबुलाई अभिभावक होइन भन्न मिल्दैन । माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याएको एमालेले हो ।
झुसिलेबाटै पुतली बन्ने भए पनि झुसिलेलाई पुतली भनिँदैन । झुसिले झुसिले हो, पुतली पुतली नै हो ।
संविधानसभामा वामपन्थीको दुई तिहाइ बुहमत भनेर त्यसै छाती पिट्दै हिँडेर हुन्छ ? आफ्नो खेतमा खडेरी परेको छ। त्यसमाथि त्यहीँ बाँदर पल्केको छ । काकाको खेतमा धान फल्यो भनेर खुसी हुने ?
म उपप्रधानमन्त्री बन्ने कुरै छैन । केपी ओलीले कुनै कक्षा दोर्होयाएर पढेन, पढ्दैन पनि।
एउटा झोला किन्दे भनेर कसैले भन्यो भने झोला किनिदिन सकिन्छ । त्यतिले पुगेन, एउटा हात्ती पनि किनिदे भन्ला । त्यो पनि किनिदिन सकिएला । ‘लौ अब त्यो हात्ती यो झोलामा हालिदे’ भनेर निहुँ खोज्यो भने के र्गने ?
म र्ककलोमाथि बन्चरो चलाउन चाहन्नँ ।
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन साथ दियौं । सल्लाह गरेर काम गर्न सुझाव दियौं । नउफ्री, नढल, नकुद्, भन्दाभन्दै मानेन । आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लड्यो । ८. झापामै बस्ने जनता चुप छन्, कञ्चनपुरबाट जितेको प्रतिनिधि चुप लागेर बसेको छ । अन्तैबाट कोही आउँछ र ‘झापा त छाडदै छाड्दिनँ, कञ्चनपुर त छाड्दै छाड्दिनँ’ भन्छ ।
खहरे आएका वेला ढुंगामुढा सबै बगाउँछ । खहरेको प्रभावमा परेर गरेको निर्णय गलत लाग्यो भने जनताले सच्याउँछन् । यो ‘जनकरेक्सन’ हो ।
बिहान सहमति हुन्छ, दिउँसो ‘सहमति भएकै छैन’ भन्नेलाई कुन डाक्टरले उपचार गर्ने ? के दबाई खुवाउने ? संविधान रोक्न बाहिर कता सिन्को, त्यान्द्रो भेटिन्छ त्यसलाई मिलाएर मोर्चा बनाइएको छ ।
संविधान बनाऔँ भन्दा केही साथीहरू उत्तेजनामा आउँछन्, उनीहरूलाई ज्वरो बढ्छ । उत्तेजित नहुनुस्, धेरै गाह्रो भए सिटामोल खानुस्, पानीपट्टी लगाउनुस् ।
दुई माना दूध उम्लेर एक पाथी जाने डेक्ची भरिएजस्तै हो माओवादी, दुई मानालाई एक पाथीको भ्रम परेको छ ।
सिनेमामा हिरोले हिरोइनलाई अँगालो हाल्छ, काखी च्याप्छ, हिरोइन आँसु झार्छे, एक अर्कालाई केही भयो भने पुर्पुरोमा हात राखेर रुन्छन्, जब सिनेमा सकियो केको लभ पर्नु हिरो एकातिर, हिरोइन अर्कै्तिर । हामीले जति राम्रो बनाउन खोजे पनि एमाले माओवादीको सम्बन्ध त्यस्तै भयो ।
झुम्रा, कागज र अरू मटेरियल त पहिल्यै थिए, तर ती पहिल्यै थिए भनेर मैले पुतली बनाएँ भन्न मिल्दैन । जसले सबै मटेरियललाई मिलाएर पुतली बनाउन सिकायो, त्यो उसैले बनाएको भन्नुपर्छ ।
हावा भरिएको बेलुनजस्तो आकार मात्र ठूलो भएर हुँदैन, तौल पनि चाहिन्छ । रुक्मांगद नामको छेस्कोले के घोचेको थियो फ्यास्स हावा खुस्कियो । माओवादी छाते च्याउ मात्रै हो, भदौको ठूलो थोप्ला पानीले नै ठेगान लगाउँछ ।
केपीको शीघ्र स्वस्थलाभको कामना (बोलीको गोली सम्झदै)
Posted on November 4, 2012 November 4, 2012 by Anand
खड्ग प्रसाद ओली (केपी ओली) अहिले बिरामी छन् र हामी उनको शिघ्र स्वस्थलाभको कामना गर्दछौं । अमेरिकामा बिरामी परेर हस्पिटल भर्ना हुनु परेको खबर लेख्दा उनी त्यति बिरामी होलान जस्तो लागेको थिएन तर अहिले झन सिकिस्त भएका एमाले नेतालाइ राजनीतिक आस्थालाइ थाँती राखेर सबैले सुस्वास्थको कामना गर्दा राम्रै होला भन्ने हामीलाई लाग्छ । यही सन्धर्भमा चिरन्जिवी पौडेलले लेखेको केपीको बोली सम्बन्धी निम्न छोटो लेख प्रस्तुत गरिएको छ (चिरन्जिवी पौडेलको फेसबुक ठेगाना)
एकथरी छन् जो केपी ओली बिरामी पर्नु भनेको देशै बिरामी पर्नु हो भन्छन्। अर्काथरी छन् जो केपी ओली मरेदेखि पृथ्वीलाई ८०–९० किलो भार कम हुन्थ्यो भन्छन् । गुण अवगुण जे भए पनि विरोधीलाई भित्तामा पुग्ने गरी बोलीको गोली हान्न ओलीलाई कसैले भेट्दैन । उनका केही चर्चित डाइलगहरु:
छोराको तिघ्रा बढेपछि बाबुलाई अभिभावक होइन भन्न मिल्दैन ।
संविधानसभामा वामपन्थीको दुई तिहाइ बुहमत भनेर त्यसै छाती पिट्दै हिँडेर हुन्छ ? आफ्नो खेतमा खडेरी परेको छ । त्यसमाथि त्यहीँ बाँदर पल्केको छ । काकाको खेतमा धान फल्यो भनेर खुसी हुने ?
एउटा झोला किन्दे भनेर कसैले भन्यो भने झोला किनिदिन सकिन्छ । त्यतिले पुगेन, एउटा हात्ती पनि किनिदे भन्ला । त्यो पनि किनिदिन सकिएला । ँलौ अब त्यो हात्ती यो झोलामा हालिदे’ भनेर निहुँ खोज्यो भने के र्गने ?
स्वस्थ उपचारका लागि भारत प्रस्थान गर्नु अघिको फोटो द्वारिका काफ्लेले खिच्नु भएको हो !
Posted in People, Politics	| Tagged famous quotes, Khadga Oli, KP Oli, quotation, sick	| 1 Comment
केपी ओली अमेरिकाको अस्पतालमा
मेक्सिकोमा भएको एउटा कन्फरेन्समा भाग लिएर नेपाल फर्कने क्रममा सोमबार बेलुका अमेरिका आइपुगेका भु.पु. उप-प्रधानमन्त्री र एमाले नेता खड्गप्रसाद ओली आकस्मित रुपमा बिरामी भएकोले मंगलबार बिहान त्यहाँको नर्थ शोर हस्पिटलमा भर्ना गर्नु परेको थियो। बिरामी भएकोले उहाँ बुधबारनै नेपाल फर्कने योजना असफल भएको थियो।
अनायास अत्यधिक ज्वरो आएका ओलीलाई भेटेर आएकी मृदुला कोइरालालाका अनुसार ओलीको शरीरमा हेमोग्लोबिनको कमी देखिएको बताएकी छिन
वहाको स्वास्थमा क्रमिक सुधार भए पछि डाक्टरहरुले उनलाई शनिबार डिस्चार्ज गर्ने बताएका छन।
ह्यापी बर्थ-डे केपी ओली
युवा संघ नेपालले यसको खेलकुद समितिले तयार पारेको ‘स्पोट्स डायरी’को विमोचनका लागि नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीलाइ बोलाएको थियो । वर्ड ट्रेड सेन्टरमा आयोजीत सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित ओलीको ६० औं जन्मदिन पनि परेकोले आयोजकहरुले उनको लागि जन्मदिनको केक पनि तयार पारेर राखेका थिए ।
एमालेका प्रभावशाली नेता ओली उनको बोलीकै कारण बेला बेलामा चर्चामा रहीरहन्छन् ।
केपी ओली भनेर चिनिने खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाइ हाम्रो तर्फबाट पनि जन्मदिनको शुभकामना । (फोटो साभार – अनलाइनखबर)